ကလေးတွေကို ပေးကစားကြပါ – Kanaung
Articles	ကလေးတွေကို ပေးကစားကြပါ	Ko Sai
ကလေးများအတွက် ကစားခြင်းဟာ စာပေပညာသင်ကြားခြင်းနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှအရေးကြီးပါတယ်… အကြောင်းရင်းကတော့ ကစားခြင်းဖြင့် ကလေးတွေရဲ့ ကာယအားအပြင် ဥာဏအားကိုပါ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်… သိပ်မကစားရတဲ့ကလေးဟာ ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကော၊ ဥာဏ်ရည်အနေနဲ့ပါ တခြားကောင်းကောင်းကစားရတဲ့ ကလေးတွေနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် ချို့တဲ့နေတတ်တာ များပါတယ်… ကစားရမယ့်အရွယ်မှာ ကောင်းကောင်းကစားပေးမှသာ အရာရာတိုးတက်မှာပါ…
အမေမွေးစပုခက်တွင်းကနေစပြီး ခြေလက်ရုန်းကန် ကစားလာခဲ့ပြီး… နည်းနည်းကြီးလာတော့ ပြေးကာလွှားကာနဲ့ ကစားတတ်လာမယ်… အဲ့ကနေတစ်ဆင့် ကစားကွင်းတွေမှာ စနစ်တကျနဲ့ပေးကစားမယ်… အဲ့လိုကစားရင်းနဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို သူကိုယ်တိုင်သိရှိလာတဲ့အခါ နောင်အသက်ကြီးလာတဲ့အထိ အားကစားလုပ်တတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်၊ အကျိုးရလဒ်တွေကို ရရှိသွားမှာအမှန်ပါပဲ…
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှသာ တစ်ကိုယ်လုံးရှိသွေးသားများ ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်သွားလာနိုင်ပြီး ဦးနှောက်လည်းကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်… ကျောင်းတက်ချိန်၊ ကစားချိန်၊ နားချိန်စသဖြင့် မိဘတွေက စနစ်တကျနဲ့ စီစဉ်ပေးတတ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်…
ခုခေတ်ကလေးအများစုကို ကြည့်လိုက်ရင် အလွန်သနားဖို့ကောင်းပါတယ်… ကျောင်း၊ ကျူရှင်အပြင် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်း၊ Piano သင်တန်း၊ ပန်းချီသင်တန်းစသဖြင့် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဆက်တိုက်တက်ရပါတယ်… အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါလည်း မနားရသေးပါဘူး… အိမ်စာတွေတစ်ပုံတစ်ပင် ပြီးတဲ့အထိလုပ်ရပါသေးတယ်… ပြီးသွားရင်တော့ တစ်နေကုန်ပင်ပန်းရသမျှ ခြေပစ်လက်ပစ်နဲ့ အိပ်ရာထဲဒိုင်ဗင်ပစ် ထိုးအိပ်တော့တာပါပဲ…
မိဘတွေက ကိုယ့်ကလေးကို ဘက်စုံထူးချွန်ထက်မြက်စေချင်လို့ သင်တန်းအမျိုးပေါင်းများစွာကို ထားပေးကြပါတယ်… သို့သော်လည်းပေါ့လေ… ကလေးက ဝန်နဲ့အားမျှတရဲ့လား ဆိုတာတော့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ပဲ သုံးသပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်… ကလေးတွေအနေနဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနည်းလာတော့ ဦးနှောက်လည်းကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်နိုင်၊ သင်ယူရသမျှအားလုံးလည်း လက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူး… ဒီအခါမှာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ယုံကြည်မှုလည်း လျှော့ပါးလာပါလိမ့်မယ်… စိတ်ဖိစီးမှုတွေလည်း ဝင်လာပါလိမ့်မယ်…
တန်ဆေး၊ လွန်ဘေးဆိုသလိုပါပဲ… ကလေးအသက်အရွယ်နဲ့ သူလက်ခံနိုင်သလောက်ကိုပဲ အပြည့်အဝပေးမယ်… တစ်ဖက်က ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစားလည်း ပေးလုပ်ထားမယ်ဆိုရင် ဒီလိုကလေးမျိုးဟာ တစ်စတစ်စနဲ့ အရည်အသွေးတွေ တိုးတက်တောက်ပြောင်လာမယ်ဆိုတာတော့ ဧကန်မလွှဲပါပဲ…
Tags Article Children
Previous Articleအမေ !!! အဖေ !!!	Next Articleကလေးများ အတွက် နည်းပညာနဲ့ဆိုင်သော အကြံပေးချက်တစ်ချို့	Comments (0)